Nkesa GNU / Linux maka obodo sayensị | Site na Linux
N'ọtụtụ peeji anyị nwere ike ịchọta ndepụta nke nkesa kachasị mma nke afọ ọ bụla, yana ndị ọzọ akọwapụtara maka nyocha nchekwa, injinia, maka ndị egwuregwu, obere diski, wdg., N'oge a, anyị ga-egosi gị ndepụta na ụfọdụ nkesa. GNU / Linux kachasị mma na ị kwesịrị ịma ma ị nọ n’etiti ndị sayensị, ebe ọ bụ na ha juputara na ngwanrọ arụnyere tupu ị ga - enyere gị aka n'ọrụ ị na - arụ kwa ụbọchị na ngalaba a dị mkpa na ọha mmadụ.
Offọdụ n'ime ha bụ ndị ama ama, ị ga-amata n'ezie ugbu a, ebe ọ bụ na a na-ekwu ọtụtụ gbasara ha. Otu ihe atụ bụ nke mepụtara CERN, otu n'ime sayensi kachasị mkpa "katidral" na ụwa ebe nnukwu hadron collider dị na akụrụngwa dị n'okpuru ala nke Europe, ọkachasị na Switzerland. Ndị kachasị mma na ndị na-enwu gbaa na-arụ ọrụ ebe ahụ iji gbalịa ịme nnukwu ọganihu na physics, na ha anaghị eji Windows ma ọ bụ Mac, ha na-eji ntọala nke CentOS nke ha.Na mgbakwunye Scientific Linux dị ka amaara na mbụ, nke a na-akpọ CERN CentOS, enwekwara ọtụtụ ndị ọzọ m ga-ewetara gị na esote ndepụta:
CERN CentOS: Ọ dị maka nbudata n'efu, yabụ na anyị nwere ike ịnweta ya n'aka onye ọ bụla n'ime anyị na njikọ m hapụrụ. Ọ bụ, dị ka m kwuru, distro nke eji na CERN na ha onwe ha emezigharịrị site na koodu ntinye CentOS nke ha jiri dịka isi. Ọ bụ ezigbo sistemụ arụmọrụ, nchekwa na nchekwa nwere ọtụtụ ngwaọrụ dị mma.
Bio-Linux: Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ nkesa nke ga-emeju akụkụ nke ndị ọkà mmụta sayensị raara onwe ha nye akụkụ nke usoro ndu, dị ka ndị raara onwe ha nye nyocha ahụike. Ọ dabere na Ubuntu ma nwee ike ịnwe ọtụtụ ngwaọrụ etinyegoro maka ịrụ ọrụ na usoro DNA, nyocha biomedical, ịse osisi phylogenetic, iji anya nke macromolecules, wdg.
NHSBuntu: dị ka aha ya na-egosi, ọ dabere na Ubuntu kwa na nke a, echebara ya na ndị ọrụ ahụike. Ọ bụ otu ndị ọkachamara na United Kingdom mepụtara ya ma jiri ya dị ka desktọọpụ desktọọpụ maka ndị dọkịta niile nke NHS National Health Service, ya bụ, ọrụ ahụike nke mba a. Anyị hụrụ ka a mụrụ ya na 2017, mana ugbu a weebụsaịtị ya adịghị ka ọ na-arụ ọrụ, opekata mpe n'oge m kpọtụrụ ...
AKELKỌ: bụ distro ọzọ raara nye ndị injinia. Ya mere, ọ gụnyere ọtụtụ ngwa arụnyere na mbụ nke ha na-eji oge niile n'ọrụ ha. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere CAD, CAM, CAE / FEA / CFD software, imepụta elektrọnik, mbipụta 3D, wdg. N'ime ngwugwu ụfọdụ a maara dịka FreeCAD ma ọ bụ LibreCAD, PyCAM, Elmer, OpenFOAM, wdg.
N'oge gara aga, e nwekwara distros ndị ọzọ, ma ugbu a, ọ dị ha ka a gbahapụrụ agbahapụ. Dịka ọmụmaatụ, Poseidon Linux emelitebeghị maka afọ ole na ole ugbu a. Ọ bụ ihe ihe ihere na ụfọdụ oru na-echezọ, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ka ndị mmepe obodo wee gbasasịa. N'otu aka, ị na-ewepụta ọtụtụ ọrụ iji mejuo ọtụtụ ụdị ma ọ bụ ndị ọrụ nke ndị ọrụ, mana na nke ọzọ, ọ bụ karịa karịa oru agbahapu...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Nkesa GNU / Linux maka obodo sayensị